सेयरिंग पर्याप्त छैन - किन तपाईंलाई सामग्री प्रवर्धन रणनीति चाहिन्छ | Martech Zone
एक समय थियो जब तपाईं यसलाई निर्माण गर्नुहुन्छ, तिनीहरू आउँदछन्। तर त्यो सबै इन्टरनेट सामग्री र धेरै हल्ला संग अत्यधिक संतृप्त हुनु अघि यो थियो। यदि तपाईं विचलित महसुस गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईंको सामग्री पहिले जति पहिला कहिल्यै चल्दैन भने यो तपाईंको गल्ती होईन। कुरा भर्खरै परिवर्तन भयो।
आज, यदि तपाईं आफ्नो दर्शकहरू र तपाईंको व्यवसायको बारेमा पर्याप्त ख्याल राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले बिल्कुलै आफ्नो सामग्री मानिसहरूलाई अगाडि धकेल्न रणनीति बनाउनु पर्छ - जसलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्दछ - सामग्री प्रवर्धन रणनीति मार्फत।
किन सामग्री बारे यति धेरै कुरा?
सबैलाई र उनीहरूको कुकुरलाई थाहा छ कसरी महत्त्वपूर्ण पाठ्यवान र दृश्य सामग्री बजारमा छ। यो मुख्य वाहन हो जसले तपाईंको सन्देश तपाईंको श्रोतालाई पठाउँदछ, यो शब्दहरू, छविहरू र भिडियोहरू हुन् जसले भावना सिर्जना गर्छन् र मानिसहरूलाई कार्यमा सार्दछन्। र कार्य संग रूपान्तरण आउँदछ, कुनै पनि व्यवसाय को उच्चतम आनंद।
तपाइँले त्यहाँ राख्नु भएको सबै कुरा, तपाईंको दर्शकको अगाडि च्यानल [ब्लग पोष्टहरू, इन्स्टाग्राम कथाहरू, न्यूजलेटरहरू, भिडियो, आदि] लाई परवाह नगरी तपाईंलाई रुचि राख्न र तपाईंको ब्रान्डमा व्यस्त राख्न मद्दत गर्दछ। यो तपाइँ तपाइँको व्यवसाय मा र अधिक ध्यान लिनको लागी मद्दत गर्दछ एक ब्ल्गरको रूपमा तपाइँको श्रोताको विस्तार गर्नुहोस्.
त्यसोभए, सामग्री सिर्जना गर्न ठूलो छ, यसलाई विभिन्न प्लेटफर्महरूमा प्रकाशन गर्नु पनि उत्कृष्ट छ, तर यदि तपाईंले यसलाई अधिकतम मात्रामा पुग्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले यसलाई विस्तार पनि गर्नुपर्छ।
यहाँ तपाईंको सामग्री प्रवर्धन रणनीति निर्माण गर्न केहि शक्तिशाली रणनीतिहरू छन्:
भुक्तान गरिएका विज्ञापनहरू - विज्ञापनहरू यी अदृश्य पखेटाको रूपमा सोच्नुहोस् जुन तपाईंको सामग्रीलाई अधिक लामोमा पुर्‍याउँछ। अधिकांश प्लेटफार्महरू, यी दिनहरू, बनेका छन् खेल्न पैसा दिनुहोस् प्रणालीहरू, विशेष गरी फेसबुक। यहाँ केहि गलत छैन, तिनीहरू एक व्यवसाय हो, तपाईं जस्तो। यदि तपाईं $ १ राख्नुहुन्छ र $ २ फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ, के तपाईं खेल्न चाहानुहुन्न? विज्ञापनहरूको लागि भुक्तान गर्नु भनेको तपाईंको सामग्रीलाई तपाईंको अवस्थित दर्शकहरूको अगाडि धपाउने एकमात्र उद्देश्यको लागि मात्र होईन। यो नयाँ दर्शकहरूमा ट्याप गर्न र तपाईंको पहुँच विस्तार गर्नका लागि पनि उत्कृष्ट छ, तपाईंको आफ्नै प्रभाव बाहिर।
अन्य ब्रान्ड र प्रभावकर्ताहरूको उल्लेख गर्नुहोस् - यहाँ लक्ष्य भनेको तपाईंको कोठामा साथीहरूसँग उनीहरूको केही सामग्री साझा गरेर वा तिनीहरूलाई सम्भव भएसम्म ट्याग गरेर सम्बन्ध बनाउनु हो। यसले तपाईंलाई उनीहरूको रडारहरूमा राख्दछ र तिनीहरूलाई अधिक समय दिईन्छ जब उचित समय आउँदछ।
प्रभावशालीहरूलाई भित्र छिर्न सोध्नुहोस् - एक प्रभावशाली श्रोतालाई ट्याप गर्न सजिलो तरिका मध्येका एक तिनीहरूलाई विषयहरूमा तिनीहरूको इनपुटको लागि सोध्नु हो। तपाईंको पाहुना पोष्ट उनीहरूको प्लेटफर्ममा प्रकाशित गर्न वा उनीहरूको श्रोताको साथ तपाईंको सामग्रीको केही अंश साझेदारी गर्न उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न कोशिस गर्नुको सट्टा, तपाईं तिनीहरूलाई तिनीहरूको आलामा भएको शीर्षकमा उनीहरूको राय माग्दै ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तिनीहरूको अन्तमा थोरै समय लिन्छ र सम्भावित रूपमा उनीहरूको दर्शकहरूको साथ तपाईंको सम्पूर्ण सामग्रीको अंश साझेदारी गर्दछ। र मद्दत गर्दछ तपाईं एक सम्बन्ध बनाउन र राम्रो इच्छा सही तरीका। साथै, केवल यथार्थपरक हुनको लागि आफ्नै आलोचनात्मक सोच प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईंको उत्पादनको भावनाहरूको सिंहावलोकनले बादल लाउनुभएन।
प्रयोग गर्नुहोस् गगनचुम्बी भवन प्रविधी! - संक्षेप मा, यो अवस्थित बहुमूल्य सामग्रीको शीर्षमा निर्माण गर्ने एक तरीका हो। अनिवार्य रूपमा, तपाई कुनै विशेष शीर्षकमा व्यापक अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, सकेसम्म धेरै डेटा भेला गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले यस विषयमा आफ्नै मोड पनि थप्नुहुन्छ र सम्पूर्ण कुराकानीमा तपाईंको अनुपम परिप्रेक्ष्य साझा गर्नुहुन्छ। जब तपाईं सक्नुभयो, तपाईंको काममा उल्लेख गरिएको अन्य सबै सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई सामग्री पठाउनुहोस् र उनीहरूको प्रतिक्रिया र उनीहरूको दर्शकहरूको साथ साझेदारीको लागि सोध्नुहोस्।
तपाईंको सामग्री पुन: निर्माण गर्नुहोस् - तपाईको साइटमा बहुमूल्य ब्लग पोष्टहरू बसिरहेको छ? तपाइँको उत्तम सामग्री प्रयोग गरेर सदाबहार गाइड सँगै राखेर उनीहरूलाई नयाँ सुरुवात दिनुहोस्। त्यसो भए अतिरिक्त ध्यान र ब्रान्ड जागरूकताका लागि नेतृत्व लि generation्ग चुम्बकको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई अवस्थित सामग्री पुनः प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ जसले तपाईंलाई नयाँ दर्शकहरू सिर्जना गर्न र ट्याप गर्न समय र संसाधनहरू लिएको थियो।
ब्लग पोष्टहरूलाई कालो आकारको सामाजिक मिडिया पोष्टहरू र कार्यक्षम उद्धरणहरूमा परिवर्तन गर्दै
उपकरणहरू प्रयोग गरी छोटो भिडियो सिर्जना गर्दै लुमेन ५ or Inhot केहि द्रुत सुझावहरू साझा गर्न
तपाईंको भिडियो सामग्रीबाट अडियो लिदै र यसलाई पोडकास्टमा बदल्नुहोस्
अन्तत: तपाईले दुबै सामरिक हुनु पर्छ तपाईको सामग्री बनाउनुका साथै लिभेरिज गर्नका लागि। यसको मतलब तपाईंले रणनीतिक रूपमा सोच्नु पर्छ र तपाईंको उत्तम सामग्रीलाई धकेल्नु पर्छ जो सम्भवतः उनीहरूलाई आवश्यक पर्दछ। यहाँ कुञ्जी छ प्रसंग.
केहि अपमानजनक छैन सामग्री को एक विशाल मूल्यवान टुक्रा बनाउनु र त्यसपछि गलत श्रोताहरूको बिरूद्धमा छीनु। यस दृष्टिकोणलाई तपाईंको सम्पूर्ण सामग्री निर्माण र प्रवर्धन रणनीति नेतृत्व गर्न दिनुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले तपाईंको श्रोताको समस्यालाई गहिरो रूपमा बुझ्नुभएको छ र तपाईं आफ्नो समाधानमा पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ। त्यसोभए, ध्यान दिनुहोस् जहाँ तपाइँको लक्षित श्रोताको ध्यान जान्छ। त्यसो भए ती प्लेटफर्महरूमा प्लग इन गर्नुहोस् प्रासंगिक सामग्री प्रयोग गरेर जुन तपाईंको व्यापार लक्ष्य र मिसनको साथ प al्क्तिबद्ध छ।
तपाइँ हाल कसरी आफ्नो सामग्री सिर्जना र प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ? र यी प्रवर्धन प्रविधिहरू मध्ये कुन तपाईं पहिले प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ? हामीलाई तलका टिप्पणीहरूमा तपाईंको विचारहरू दिनुहोस्!
टैग: ब्रान्डहरुसहयोगसामग्री प्रवर्धनसामग्री पुन: निर्माणप्रभावकारीहरूभुक्तान गरिएको विज्ञापनखेल्न पैसा दिनुहोस्पुनरुत्थानसामग्री पुन: निर्माण गर्नुहोस्गगनचुम्बी टेकनीक